Sangano rinokweretesa mariu pasi rose, reInternational Monetary Fund (IMF) rinoti hupfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino.
IMF inoti izvi zvinotevera goho rakanaka gore rino, kuvandudzwa kwemabasa emhando dzemoto, pamwe nemabasa ekuvaka.
Mumashoko ayo mushure memisangano yakaitwa nechikwata cheIMF chaitungamirwa naDhaneshwar Ghura negurukota rinoona nezvemari, VaMthuli Ncube, gavhuna webhanga guru munyika, Dr John Mangudya, vakuru vakuru vehurumende nevemakambani akazvirira, IMF inoti kunyange hazvo hupfumi hweZimbabwe hwakadzikira muna 2019 na2020 nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira nzara, Cyclone Idai neCovid-19, gore rino hupfumi uhwu huchakura.
Asi IMF inoti izvi zvichaenderana nekuti denda reCovid-19 richapararira sei munyika nekutiwo nyaya dzekubaya vanhu nhomba dzichabatwa sei.
Inotiwo pane zvirongwa zvekusimbaradza hupfumi zvinofanira kutevedzwa zvakaita sekubhadhare zvikwereti, kuderedza hurombo pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka.
IMF inoti nyaya yekudzikamisa mari yemuno nekuisimbaradza pachishandiswa zvirongwa zvakaita seForeign Currency Auction system zvinhu zvakanaka chose uye zvinokurudzirwa.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eIMF pamafambiro ehupfumi hweZimbabwe.
Vatiwo ichokwadi kuti Covid-19 inogona kuvhiringa hupfumi.
Vati pachine matambudziko akawanda sezvo veruzhinji vari kutambura zvakanyanya, pamwe nekusamira zvakanaka kwenyaya dzehutano.
Vatiwo makambani ehurumende pamwe nezvikwereti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti hupfumi hufambe zvakanaka.
Svondo rapfuura World Bank yakaburitsawo gwaro pamusoro peZimbabwe ichiti hufpumi hwayo huchakwira nezvikama zvitatu nechidimbu kubva muzana nekuda kwegoho rakanaka asi ikati denda reCovid-19 rinogna kuvhiringidza hupfumi uhu.
Hurumende inotarisira kuti hupfumi huchakura nezvikama zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rino.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda vakazvimirira, VaMasimba Manyaya, vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemaonero ehurumende, IMF neWorld Bank vachiti denda reCovid-19 ravhiringa hupfumi pamwe nekuunza kutambura kuruzhinji munyika.
Pari zvino Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwenhomba yekudzvirira kupararira kweCovid-19 uye inotarisira kutambira nhomba dzinodarika mazana mashanu ezviuru kubva kuChina mwedzi uno.
Pane vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere vakabatwa neCovid-19 nezuro uye pane vanhu vatatu vakafa nedenda iri nezuro wekare.
Kusvika nezuro, pane vanhu zviuru makumi mana nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu, 40 556, vainge vabatwa neCovid-19 uye vafa kusvika nezuro vave churu nemazana matanhatu nemakumi mana, 1 640.
Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumu mapfumbamwe nevapfumbamwe, 697 399, vange vabaiwa nhomba yekutanga uye zviuru ,mazana mana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nevana, 423 474 vange vabaiwa nhomba yepiri yeCovid-19
Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19.